XOG: Kenya oo qatar amni ku sheegtay ‘haddii Mareykanka uu ciidamadiisa kala baxo Somaliya’ | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Kenya oo qatar amni ku sheegtay ‘haddii Mareykanka uu ciidamadiisa kala...
XOG: Kenya oo qatar amni ku sheegtay ‘haddii Mareykanka uu ciidamadiisa kala baxo Somaliya’
Nairobi (Halqaran.com) – Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Kenya ayaa sheegtay in tallaabada dowladda Mareykanka ay Ciidankeeda ugala baxayso Soomaaliya inay qatar gelinayso abaabulada amniga ee lagula dagaallamayo argagixisada .
Kenya ayaa xustay in ciidanka Mareykanka ee ku sugan gudaha Soomaaliya ay qeyb weyn ka geysteen hakinta weerarada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee Kenya.
Kamau Macharia, xoghayaha guud ee wasaaaradda Arrimaha dibada Kenya ayaa sheegay in Kenya ay muddooyinkii la soo dhaafay la kulantay dib u dhac xoog leh oo dhanka maalgashiga ah iyo dib u dhac dhaqaale kadib weeraradii argagaxisada ee xiriirka la lahaa Al-Qaacida, oo ay ku jiraan qaraxii safaarada Mareykanka ee 1998 iyo weerarkii Westgate Mall iyo Dusit 2 Hotel iyo kuwo kale.
Sidoo kale, Kamau Macharia ayaa sheegaya in ciidanka Mareykanka ay qeyb weyn ka yihiih dagaalka lagula jiro Ururka Al-Shabaab.
Ugu dambeyn, hadalka Xoghayaha guud ee wasaaaradda Arrimaha dibada Kenya ayaa imanaaya, kaddib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweyne Donald Trump uu ku wargaliyay la taliyayaashiisa sare inuu doonayo in ciidamada Mareykanka kala baxo Soomaaliya.
ciidamada mareykanka ee laga saarayo Somaliya